Colts: Superbowl Champs! Basa rekuvaka: Vanokundwa! | Martech Zone
Colts: Superbowl Champs! Basa rekuvaka: Vanokundwa!
Muvhuro, Kukadzi 5, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Ini ndanga ndakanganisa pane izvi, ndine urombo Careerbuilder!
Pane atove akawanda ezvinyorwa nezve Superbowl. Yangu masendi maviri chete ndeyekuti waive mutambo uri nani pane zvatakamboona kwenguva yakareba. Ndiri kufara kuti maColts akunda! Sangano rine kirasi, chiremerera, uye rinotungamirwa nemudzidzisi wechitema wechiKristu. Iyo meseji yakanaka kune wese munhu pane izvo zvinotora kuti ubudirire.
Mumwe akahwina Superbowl aive Careerbuilder… IMO, Vaive nezvakanakisa kushambadzira kweSuperbowl. Nekudaro, mune yayo yakagara ichionekwa idiocy, iyo (pepanhau) kambani yakasarudza kunze kwekushambadzira kwehutachiona uye haizorege vanhu vachipinza kushambadzira kwavo kune mamwe masaiti. Ivo havangozviwana chete. Mapfupa. Dzvanya mavhidhiyo uye iwe uchaona zvandiri kureva.
Chero ani akaita sarudzo yekumisa izvi kubva kuhutachiona anofanirwa kudzingwa basa. Tora chiratidziro chinotariswa kwazvo pasi rese, wedzera ako akanaka kushambadza, uyezve usarega vanhu vachigovana nekutaura nezvavo. Vakakundwa.
Wona kushambadza pano:
Mhoroi, ndiri Mac. Uye ndiri PC.
Kukadzi 5, 2007 na12: 30 PM
Kana makambani achinyatsoda kuita kuti vatengi vafare, vanofanirwa kuenda kumberi kudhura Super Bowl kushambadza uye pachinzvimbo voisa mari yavo kuMukuru weVatengi, munhu mumwe chete wesimba akapomerwa nekuzviisa iye muvatengi? pfungwa.
Asi pachinzvimbo ivo vanoshandisa yavo nguva nemari kuona kuti kushambadza kwavo kunonakidza uye kunovaraidza, izvo hazvireve kuti inotengesa zvimwe zvigadzirwa. Mushambadzi akanaka anokatyamadza vatengi nekuvapa mazano matsva ekuti vangashandise sei chimwe chigadzirwa. Zvishambadziro zvakagadzirwa nevanhuwo zvavo kana vane mukurumbira vane mukurumbira vanogona kuseka, asi hazviite kuti vatengese kutengesa. Kune madhora ese aunoshandisa iwe unofanirwa kunge uchiona dhora kumashure uye ndinopokana zvechokwadi kuti makambani aya ari kugadzira imwe $ 2.6 mamirioni nekuda kweaya maSuper Bowl kushambadza.
Vatengesi vanofanirwa kumira kufunga kuti kushambadzira INOFANIRA kuve nekugadzira. IYO yekutengesa zvinhu uye masevhisi. Dzimwe nguva kushambadzira kushoma kwekugadzira ndiko kunonyanya kushanda.
Kukadzi 5, 2007 na1: 27 PM
Iko kune 'genre' iyo inotarisirwa yeSuperbowl Ads, zvakadaro. Komedi zvirokwazvo kutarisira. Zvakare, komedhi inobatsira mukumaka ... iwe unorangarira zvinosetsa kushambadza kupfuura zvakakomba. Pfungwa yangu pane ino posheni ndeyekuti chete Careerbuilder akaisa mari, akagadzira akati wandei, ndokuzozvikanda zvese nekusarega kushambadzira kwehutachiona kuchitora. Zvinonyadzisa.
Ndiri muchibvumirano chekuti mari inogona kushandiswa zvirinani. Ini ndinofunga maSuperbowl Ads akanyatso kubhejera… GoDaddy akabhejera gore rapfuura uye akahwina. Gore rino ndinenge ndave kuda kubheja kuti kushambadza hakuzovi nechaunoda. Shambadziro yeSuperbowl inogona kutora vanhu kwauri - asi iwe chete ndiwe unogona kuvachengeta. Kumwe kudyara mbichana uye kugona kune iyo 'yekuchengeta' divi reiyo equation kungave nekudzoka kuri nani!
Kutenda nekuverenga nekupindura!
Kukadzi 5, 2007 na3: 34 PM
Zvakanaka hazvo ivo vakatumira paYouTube. Saka havatenderi iwe kuti upinze vhidhiyo yacho yese, asi zvakadii zvakanyanya zvavakaita? Iwe uchiri kutumira vhidhiyo.
Ndine chokwadi chekuti manejimendi manyorerwo kumashure kwaive ekuti nenzira iyi vanogona kuzokwanisa kuona zvirevo mune imwe nzvimbo yepakati.
Ini handikwanise kufunga kuti sei zvimwe waizozvitumira kuYouTube, rega vanhu vabatanidze kwazviri, asi kumanikidza vanhu kuti vadzokere kuYouTube kunoona.
Kukadzi 5, 2007 na5: 36 PM
Handina chokwadi chekuti mafungiro avo aive ei. Iko chaiko pakanga pasina yekupinda kodhi pane yavo saiti chero… Ndakaedza kubaya iyo yekumisikidza tambo uye ndikawana izvo zvaunoona pamusoro. Zvakangoipa zvakanyanya - ivo vari kukunda chinangwa cheYouTube neSocial Networking.